Macalimiin ka cabatay fulinta sharci cusub - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Macalimiinta oo ka cabanaya sharci ku shasbaaya in ay macluumad u gudbiyaan laanta socdaalka sawir: Björn Larsson Rosvall/TT
Macalimiin ka cabatay fulinta sharci cusub
La daabacay torsdag 2 november 2017 kl 10.30
Haayadda ilaalisa anshaxa fulinta xirfadaha ayaa ka hortimi sharci macalimiinta ku khasbaaya in ay macluumaadka ardeyda gaar u gudbiyaan laanta socdaalka.
Macalimiinta iskuuladda ayaa ka cabanaya sharci ku khasbayaa in ay laanta socdaalka u gudbiyaan macluumaadka dhalinyarada soogelootiga ah ee degennaashaha ku meel gaadhka ah haysta ee dhigata dugsiyadda sare. Sharcigan oo dhaqan galay xagaagan ayaa u jeedadiisu tahay in ardayda qaarkood loo kordhin karo degennaanshaha hadii ay waxbarashadooda si firfircoon uga qaayb qaataan. Arrintan oo macalimiinta ku khasbaysaa in ay laanta socdaalka gaadhsiiyaan macluumaadka ardeyda.
Hayeeshee cabashooyin badan ka dib haayadda qiimaysa in xirfadaha loo fuliyo si anshaxa iyo sharciga waafaqsan ee la yidhaahdo Yrkesetiska Rådet ayaa hada eedayn u soo jeediyey sharcigan, oo ay ku tilmaameen mid ka hor imanaya hanaanka xirfada maclinnimada loo fuliyo.
-Xirfadayaddu waa in aan dadka waxbarno. Kama shaqeeynayno uruurinta macluumaadka. Shaqada keli ah ee maamul ee aan haynaa waa in aan shahaadada qiimayno. Qiimaynta shahaadadana umasaynayno sida laanta socdaalku doonayso
Jesper Rehn oo ah gudoomiyaha haayadda qiimaysa ilaanta anshaxa xirfada macalinimada.
Sida haayaddan sheegtay waxa sharcigan keeni karaa in macalimiinta cadaadis kaga yimaado dhanka laanta socdaalka iyo dhanka ardeyda iyo waalidiintooda. Daleeceeynta haayaddan u soo jeedisay sharcigan ayaa la filayaa in ay taageero u noqoto macalimiinta diidan in ay gudbiyaan macluumaadka ardeyda degennaanshaha ku meel gaadhaka ah haysta.